Izikhumba ze-Leather Leather Ankle | Ama-Buddhatrends
Izibopho ezinesibopho se-Soft Brown Isikhumba
Usayizi wesibhakela Isithende ku-Toe (cm)
konke isikhumba sangempela esihle kakhulu!
Ifika ngokushesha kakhulu, ingafika kangcono emaphaketheni, mhlawumbe enqoleni, kodwa ayizange ilahlekelwe yimuphi umonakalo. isikhumba sihle kakhulu, asibonakali sichotshoziwe noma soma kalula futhi ngaphakathi siyathandeka kakhulu.
Cool izicathulo !!! ngobukhulu be-Ugala, ngezinyawo ze-24 cm ithatha i-8,5, kungenzeka ukuthi ingubo yesembatho se-toe terry ebhalwe kwi-39 kuphela, ingase ifike ngokushesha uma kungeyona imemezelo-i-mail e-Russia enyanyekayo ...